Hoggantoonni Biyyoota Gamtaa Afrikaa Karooraa Traamp dhimma Baha Jiddu Galeessaa ilaalchisee baase kan hin deeggarre tahuu ibsan - NuuralHudaa
Hoggantoonni Afrikaa “karoora nageenya Baha Jiddu Galeessaa” maqaa jedhuun, wixinee prezdaantiin Ameerikaa Doonaald Traamp Israa’elii fi Filisxeem ilaalchisuun dhiheesse kan hin deeggarre tahuu ibsan. Hoggantoonni biyyoota Gamtaa Afrikaa Kora 33ffaa irratti hirmaatan akka jedhanitti, karoorri nageenyaa kun faayidaa fi nageenya lammiilee Falasxiin kan hin eegsifne waan taheef fudhatama hin qabu jedhan.
Dura taa’aan Komishiinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mahaammat ibsa kenneen, karooricharratti sadarkaa idil addunyaatti mariin irratti kan hin geggeeffamin qofa osoo hin taane, Karoorichi mirga lammiilee Falasxiin kan hin eegsifne tahuu beeksise.
Muummichi Ministeera Falasxiin Dr. Muhammad Shatiyyi ammoo Alhada kaleessaa hirmaattota korichaatiif haasaya godheen “Gamtaan Afrikaa karoora nageenyaa maqaa jedhuun labsii Ameerikaan baste, heera addunyaa kan cabsee fi Falasxiinota kan hin hirmaachisin jechuun kuffisuu isaatiif, maqaa ummata Falasxiiniin galatoomfachuu barbaada” jedhe. Dr. Muhammad Itti dabaluudhaanis, hanga Biyyi Falasxiin walaba taate magaalaa guddoo Al-Qudsi waliin hundeeffamtutti gamtaan Afrikaa qabsoo Falasxiin deeggaruu akka itti fufu gaafate.
October 24, 2021 sa;aa 6:55 pm Update tahe